Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe oo hoggaaminaya dagaal ka dhan ah Al-Shabaab | SAHAN ONLINE
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe oo hoggaaminaya dagaal ka dhan ah Al-Shabaab
KISMAAYO – Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam(Axmed Madoobe) ayaa sheegay in Xildhibaanada iyo Wasiirada maamulkiisa looga baahan yahay diyaar garow dagaal oo dhan ah Al-Shabaab si looga xoreeyo Jubbooyinka.
Axmed Madoobe oo hadalkan ka sheegay furitaanka kalfadhiga Baarlamaanka Jubbaland ayaa sheegay in laga doonayo mas’uuliyiinta Jubbaland iney ka qeyb qaataan dagaalka Al-Shabaab oo ay safka hore la gallon ciidanka Jubbaland.
Waxaa la idinka doonayaa 37 Wasiir, iyo 75-ta Xildhibaan in aan kuligeen u diyaar u noqo oo aan deegaanadeeda dib ugu noqono, dagaal wada jir ah aan galno, anagoo sidana tuutihii ciidanka”ayuu yiri Axmed Madoobe oo la sheego inuu yahay nin ku xeel dheer hoggaaminta dagaalka, horayna uga soo qeyb qaatay dagaaladii Maxkamadaha iyo Xisbul Islaam.
Madaxweynaha Jubbaland ayaa sheegay in askariga dagaalka ku jiro uu arko mas’uuliyiinta oo dagaalka kula jira uu mooraalkiisu hagaagayo .
Maamulka Jubbaland ayaa marar badan oo hore ku dhawaaqay dagaal ka dhan ah Al-Shabaab taasoo la rumeysan yahay in ay gacanta ku hayso guud ahaan gobolka Jubbada dhexe.